Ikpuchido Gị Online Persona | Martech Zone
Ikpuchido Gị Online Persona
Mọnde, Febụwarị 25, 2008 Mọnde, Febụwarị 25, 2008 Douglas Karr
Dịka ụwa dị digitized na okwu ọ bụla ị na-ekwu ma na-eme na-eme ka ejide gị na vidiyo, ọ dị mkpa na ị ga-ejide onwe gị. Nke a bụ isi maka azụmaahịa chọrọ ịmepe mbọ ahịa ha na ịde blọgụ na mgbasa ozi.
Mgbe ị na-ezute onye ọrụ ibe gị na egwuregwu baseball ma mee ka ha hụ gị na-eme mkpọtụ na ị drinkingụ mmanya abụghị nnukwu ihe n'oge gara aga, ịntanetị enweghị oke n'etiti ndụ onwe onye na azụmaahịa. Y’oburu na inwere onye ino online, nke ahu bu onye gi n’aru oru. Onweghi onyeiche gi na weebụsaịtị mkpakọrịta nwoke na nwanyị na LinkedIn - ị nọ 'n'ịntanetị'.
Ihe omuma banyere intaneti abụrụla ihe eji enyere mmadu aka
E were n'ọrụ n'ọrụ Google ịchọta na nyocha ọrụ. Ihe ikpeazu ichoro bu ịhapụ uzo, nke onwe ma obu nke ahia, nke puru imetuta otu ulo oru gi ma obu olile anya gi g’esi mata gi.
Afọ ole na ole gara aga, arụrụ m ọrụ na ụlọ ọrụ ebe otu onye ọrụ zitere ọkwa na-ezighi ezi wee mee ya. Agbanyeghị na ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ọrụ onye ahụ, edepụtara ya n'ọfịs nke ndị ọrụ njikwa onye ahụ - akara a na-agaghị agbanwe agbanwe ma mebie ikike onye ahụ ịkwalite ma ọ bụ were ọrụ ndị ọzọ n'ime nzukọ ahụ.
Ihe ndekọ vidiyo
Anọ m na-etinye oge na Ahụhụ, nke ngwụcha, ngwa nke ụdị ngwakọta (na mwekota) nke vidiyo na nkata. Otu enyi kwuru n'abalị a na ọ hụla n'ezie omume banyere ndị mmadụ ọ na-asọpụrụ ma ọ bụghị.
Nsogbu dị okpukpu abụọ: Seesmic fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezigbo oge, ya mere ndị mmadụ na-akparịta ụka ma mgbe ụfọdụ na-enwe mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ. Akụkụ ọzọ bụ na Seesmic jikọtara ọdịiche dị n'etiti ọkachamara na azụmahịa. Fọdụ ndị folks na-a drinkụ mmanya mgbe ha na-akparịta ụka- ụfọdụ na-a areụbigakwa mmanya ókè. Ndị ọzọ agbawaala maka mkparịta ụka gbasara okpukperechi na / ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Iswa Adịghị Njikere
Ọ bụ ihe magburu onwe ya na anyị nwere nkà na ụzụ dị ka nke a ebe mmadụ ga-ekpughe mkpụrụ obi ya ma soro ndị enyi ya gburugburu ụwa kwurịta okwu nke ọma. Nsogbu bụ na ụwa adịghị njikere maka ụdị nghọta a. Ngwá ọrụ dịka Seesmic nwere ike inye nghọta dị ukwuu banyere echiche mmadụ banyere ọrụ, ndụ… ma nye ụfọdụ ntinye na nkwụsi ike ha.
Onye nwere ike bụrụ onye ọrụ zuru oke, enwere ike iwepụ ya na ohere mgbe onye njikwa na-ewe ọrụ nọdụrụ ma nyochaa oge nke mkparịta ụka ha n'ịntanetị.
Ikpuchido Persona Gị
Enwere ihe ole na ole ị nwere ike ime iji kpuchido gị Online Persona and Reutation:
Zere mkparịta ụka ebubo na mmekọahụ, okpukpe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, wdg ebe ị nwere ike itinye echiche nke a ga-aghọtahiekarị. Wepụ mkparịta ụka ndị ahụ na offline.
Zere ịnọ n'okpuru ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ onlineụ alcoholụ na-aba n'anya n'ịntanetị. Simply naghị achịkwa mmetụta gị na omume gị.
Na-eburu n'uche mgbe niile na ihe ọ bụla ị na-eme bụ ndekọ na Schoollọ Akwụkwọ, Ọrụ, Ndị na-ede akụkọ, Gọọmentị, na ọbụna Ezinụlọ nwere ohere ịnweta.
Mbelata Egwu na Mwepụ Mwepu
Programsfọdụ mmemme, ọbụlagodi nke dị n'ịntanetị, na-enye nhichapụ ọdịnaya gị. Guo Usoro Ọrụ ndị ahụ wee hụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike iwepu vidiyo, ụda, akụkọ ihe mere eme, wdg. Wdg Ọ bụrụ n’ịchọta onwe gị n’ọnọdụ ebe i mehiere, gbalịsie ike iwepụ ya. Site n'ụzọ, ohere nke ị ga-aga nke ọma bụ nnọọ ezigbo.
Ghichaa ya. Ọ bụrụ na ị nwere mkparịta ụka 1 na 10 nke na-egosi na ị na-afụ elu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, gbaa mbọ jide mkparịta ụka 1,000 na-esote na-enweghị ịfụ elu gị. Inye ọdịnaya dị mma karị na ntanetị ga-ebelata ihe ize ndụ nke ọdịnaya na-adịghị mma mmadụ nwere ike ịchọta. Ọzọkwa, nke a abụghị ihe nzuzu, mana ọ nwere ike inye aka.
Chee echiche! Ndụmọdụ kachasị mma bụ ka ị banye n’ọnọdụ ntanetị nke ị nwere ike ịme ihere ma emechaa. Naanị zere ọnọdụ ndị a kpamkpam.
Ekwenyesiri m ike na otu ụbọchị, anyị ga-abụ obodo nke na-anabatakarị omume (mis), na-amata na ihe ọjọọ na-eme ndị ezigbo mmadụ ma ndị ezigbo mmadụ na-emehie kwa. Mana rue oge ahụ, gbaa mbọ hụ na ị na-elekarị anya otu ị si ahụ mmadụ na ntanetị.
Ekwesịrị m ịgbakwunye na mkparịta ụka a sitere n'ike mmụọ nsọ Dr. Thomas Ho, onye blogged na isiokwu nke ịmepụta mmadụ na ntanetị.
Ebee ka bọtịnụ na-esote?
Anyị Super Bowl nke 2012, Versiondị 2!
Feb 25, 2008 na 2:48 PM
Anyị na-enwe nnukwu ihe ize ndụ nke ịdaba na nsogbu mgbe anyị bidoro iche echiche gbasara "personas" ma ọ bụ na-apụ ma ọ bụ na-apụ. Ihe ọ pụtara bụ na anyị abụghị onwe anyị ma na-ama ụma zoo ihe ma ọ bụ mee ka anyị bụ ihe anyị abụghị.
Dị echiche ahụ nwere ike ịdị ize ndụ n’ihi na ndị mmadụ nwere ike ibelata nsonazụ ya mgbe ha chere na ha amaghi.
Doug Echere m na ị bụ akara aka nke akara na otu n'ime okwu gị n'elu. Tinye otu okwu ma m nọnyeere gị.
Ihe ikpeazu ichoro bu ịhapụ uzo, nke onwe ma obu ahia, nke puru [adịghị mma] Mmetụta otu ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ atụmanya ga-esi amata gị.
Enwere m olileanya na atụmanya ahụ ga- be n'ezie metụtara site n'ịntanetị m. Ọ bụ akụkụ nke onye m bụ na uru m na-eweta na tebụl.
Na mgbe niile m na-eche na mama m & onye ọrụ n'ọdịnihu ga-elele ihe ọ bụla m tinyere na ntanetị. Nke ahụ na-enyere m aka ijide onwe m na ịhapụ ihe nzuzu.
Feb 25, 2008 na 3:08 PM
Ezigbo nzaghachi, Chris!
Aga m eji nkwanye ugwu ekwenye na inwe onye ịntanetị na-ezo ma ọ bụ na-eme ka ọ dị.
Ọ bụrụ na m nwere atụmanya gaa nzukọ, ana m akpụ afụ ọnụ ma na-eyi kootu. Kwa ụbọchị na-arụ ọrụ m na-eyi khakis ma gbaa ajị ụbọchị ole na ole. Mgbe m na-ala n'ụlọ, enwere m ike ịwụnye ihe ụfọdụ n'ime ụgbọ ala, mana ọ bụrụ na m na-anya onye ahịa ya gburugburu, agaghị m atụba AC / DC.
M nwekwara a njakịrị nke nwere ike iwe ụfọdụ ndị oge ụfọdụ. Mụ na ndị ọrụ ibe m nọrọ ma ọ bụ nwee atụmanya, adịkarịghị m egosipụta ụdị ịkpa ọchị ahụ n'ihi na ọtụtụ ndị nwere ike iwere ya na ọ bụ ihe ekwesighi.
N'ọnọdụ ọ bụla, anaghị m eme ihe n'eziokwu ma ọ bụ zoo ya ezigbo mu. Naanị m na-egosi 'akụkụ kachasị mma' ma ọ bụ 'akụkụ kachasị mma'. Ọ bụ m (tụkwasị m obi - a na-egosi m mmejọ), mana ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na m chọrọ iru ndị na-ege ntị kachasị ma nweta nkwanye ùgwù nke ndị mmadụ.
Isi okwu m bụ n'ezie ihe anyị ga - ekwenye na - ụwa adịghị njikere maka ụdị nghọta a. Achọrọ m ka ọ bụrụ - mgbe ahụ enwere m ike iji ejiji na khakis, ghara ịkpụ afụ ọnụ, ma jiri ụfọdụ ndị ọrụ ibe m nọ n'ụgbọ crank "
Nke ahụ anaghị eme oge ọ bụla, n'oge na-adịghị anya.
Feb 25, 2008 na 5:25 PM
M nọnyeere gị ebe ahụ, Doug. M na-abụ abụ na redio na-agbanye windo ya up!
Ọ bụ otu ihe ka onye nọ ọdụ na nkwụsị ọkụ n'akụkụ m na-eche na m nwere ike ịbụ obere nzuzu na-asọpụrụ. Ma, ọ bụ ihe ọzọ na-egosi na m bụ site windo windo!